मिनी आइपीओमा लगानी गर्न सगुनको आग्रह, नया फिचरहरु छिट्टै उपलब्ध हुने! - Nepali Times Australia :: The First Nepali Magazine Published in Australia
मिनी आइपीओमा लगानी गर्न सगुनको आग्रह, नया फिचरहरु छिट्टै उपलब्ध हुने!
-- नेपाली टाईम्स अष्ट्रेलिया / प्रकाशित मिति : शनिबार, भदौ २७, २०७७
संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुख्यालय रहेको सामाजिक सञ्जालमा आधारित इ–कमर्स कम्पनी, सगुन इंक, ले प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई ढुक्क भएर सगुनमा लगानी गर्न आह्वान गरेको छ।
कम्पनीद्वारा जारी गरिएको “रेग ए प्लस” मिनी आइपीओबारे जानकारी गराउन जुम मार्फत हालै आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सगुनका संस्थापक गोविन्द गिरीले सगुनले लामो यात्रा पार गरेको र प्रयोग कर्ताहरुको विश्वास र माया जित्न सफल भएको बताए। “सन् २०१५ बाट सुरु भएको हाम्रो एप आज विश्वका लाखौं मानिसको हातहातमा पुगेको छ, हिजोका दिनमा सर्वसाधारणको पहुंचमा नभएका अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्म पनि आज लगानीकर्ताहरुका लागि सुनौलो अवसर बनेको छ ।”
उनले एपमा भिडियो, च्याट लगायतका फिचरहरु छिट्टै उपलब्ध हुने जानकारी पनि गराए। उनले विश्वभरका लगानीकर्ताहरुलाई मिनी आइपीओमार्फत लगानी गर्न आह्वान पनि गरे । कानूनी मान्यताअनुसार लगानीकर्तामाझ आएको सगुनले आगामी वर्षको सुरुमै सेकेण्डरी आइपीओमा जाने बताइएको छ ।
फेसबुक, ट्वीटरजस्ता ठूला कम्पनी सगुनको जस्तै चरणमा हुँदा नेपालीको पहुंचमा थिएनन्। तिनमा सर्वसाधारणको लगानीका लागि कुनै अवसर पनि थिएन। तर, सगुनले भने सर्वसाधारणका लागि लगानीको वातावरण बनाएको भन्दै गिरीले नेपाली डायस्पोराका लागि यो लगानीको नयाँ र उत्तम अवसर भएको बताए ।
संस्थापक गिरीले अहिले फेसबुकले नेपालबाट बर्षेनी २२ अर्ब रुपियाँ विज्ञापनबाट आम्दानी गर्ने गरेको अनुमान गरिएको बताउंदै सगुनले त्यो रकम नेपालमै रोक्न चाहेको बताए। “हामीले नेपालीबाट प्राप्त गरेको मुनाफा नेपालकै आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि प्रयोग गर्ने छौं। यसमा ढुक्क हुनुस्, नेपालबाट कमाएको सबै पैसा हामी नेपालमै रोजगारी र आर्थिक विकासका लागि प्रयोग गर्छौ“,” उनले भने।
संस्थापक गिरीले आफुले सन् २०१४ मा अमेरिकाको प्रतिष्ठित जागिर छाड्दा आफुसंग जम्मा १,३०० डलर रहेको र सहसंस्थापक सिटौलासंग मिलेर स्थापना गरेको कम्पनी सगुन इंकलाई सन् २०२३ मा न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा दर्ता हुने प्रवासी नेपालीहरुले स्थापना गरेको पहिलो कम्पनी बनाउने आफ्नो सपना रहेको बताए। उनले ‘एग्रीगेट न्युज’ को क्षेत्रमा आफुहरुले काम गरिरहेको र नेपाली मिडियासंग दीर्घकालीन रुपमा साझेदारको रुपमा काम गर्न चाहेको बताए। “एउटा कम्पनीको रुपमा सगुनको वृद्धि हुँदै जाँदा संसारभरि रहेका नेपाली मिडिया पनि अवश्य लाभान्वित हुने छन्,” उनले भने।
सेप्टेम्बर महिनाभर लगानीको अवसर
सगुनले “ग” श्रेणीको साधारण शेयर मिनि (आइपिओ) प्रतिकित्ता ३० डलरका दरले ३ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई बिक्रि गरिरहेको छ । आगामी सेप्टेम्बर ३० तारिख सम्म नेपाल, इरान र उत्तर कोरिया बाहेकका लगानीकर्ताले आइपिओ खरिद गर्न पाउनेछन् । नेपालको कानून अनुसार नेपालबाट विदेशी कम्पनीहरुमा लगानी गर्न नपाइने त्यस्तै अमेरिकी कानूनले उत्तर कोरिया र इरानका नागरिकहरुलाई अमेरिकी कम्पनीहरुमा लगानी गर्न रोक लगाएको छ ।
कम्तिमा ३० कित्ता शेयर नौ सय डलरमा खरिद गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । सन् २०२१ को शुरुमा सेकेण्डरी आइपिओमा जाने रणनीति रहेकोले पनि मिनि आइपिओमार्फत लगानीको अवसर यो भ्यालुएशनमा यही नै अन्तिम पटक हुने सगुनका सहसंस्थापक कविन सिटौलाले जनाए।
सगुनको शेयर खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले https://www.sagoon.com/invest मा गएर वा सगुन एपमा रहेको मिनि आइपिओ ट्याब छनोट गरी लगानीका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
अहिले संसारभरि सगुनका प्रयोगकर्ताहरु ८१ लाख बढी रहेको सो कम्पनीले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा सगुनका नेपाल कन्ट्री म्यानेजर आनन्द बज्राचार्य तथा सगुनकी सह संस्थापक स्वाति दयालले क्रमशः नेपाल र भारतमा सगुनका सेवा तथा उत्पादनबारे जानकारी दिएका थिए। सगुनका प्रयोगकर्ता विशेषगरी अमेरिका, नेपाल र भारतसहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा बढीरहेका छन् । नेपालमा प्रभु ग्रुप, भाटभटेनी, फेवा बजारसंग सगुनको सम्झौता भइसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार सहज बनाउन नविल बैंकसग छिट्टै सहकार्य गर्न लागेको सगुनले जनाएको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै डाउनलोड हुने एपहरूमध्ये सगुन ५ औं स्थानमा छ।
सगुनका ग्लोबल कोर्डिनेटर सूर्य गुरुङले स्टार्ट अप कम्पनीमा गरिएको लगानी दीर्घकालिन लगानी भएको बताउंदै लगानी गर्नासाथ प्रतिफल खोज्ने सोच राख्न उपयुक्त नहुने बताए। बरु यस्तो स्टार्ट अप कम्पनीमा लगानी गर्न विरलै पाइने अवसर प्राप्त भएकोमा लगानीकर्ताहरु खुसि हुनु पर्छ, उनले भने । उनले भविष्यको लागि र सगुनको भिजनमा साथ दिने र विश्वास गर्ने सबै धन्यवादका पात्र भएको बताए । उनले सगुनको यात्रा धेरै अघि बढेको र यो यात्रामा कोही प्रवासी नेपाली पनि छुट्नुहुन्न भन्दै विश्वभरका नेपालीसहित अन्य लगाीकर्तालाई समेत जोड्दै जाने बताए।
सो पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल र नेपाल बाहिरका गरी ७० भन्दा बढी पत्रकार र सगुन ग्लोबलका सदस्यहरु सहभागी थिए ।
युवालाई जन्माउन नचाहने अन्धो पुस्ता
Understanding the Significance of Each day of Tihar!
सामाजिक संजालको सही सदुपयोग गरौं, समाजलार्ई नकरात्मतावाट जोगाऔं
थप एक हजार ७०३ मा कोरोना पुष्टि
काठमाडौं– नेपालमा थप एक हजार ७०३ जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि...
नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन राष्ट्रपतिको आग्रह
काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई आपसमा मिलेर नयाँ उचाइमा...
नेपालमा चौबीस घण्टामा २३ जना सङ्क्रमितको मृत्यु
काठमाडौं- नेपालमा कोरोना भाइरसका एक हजार ६१४ जना सङ्क्रमित थपिएका छन् ।...
सगरमाथाको नयाँ उचाई घोषणा गर्न स्वीकृति
काठमाडौं– सगरमाथाको नयाँ उचाई घोषणा गर्न मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।...
तीन महिनामा भित्रियो दुई खर्ब ५८ अर्ब रेमिट्यान्स
काठमाडौं– चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा रु दुई खर्ब ५८ अर्ब...
घरघरमा द्यौसी-भैलो खेलेर मनाइयो ताज्मानियामा तिहार
ताज्मानिया । अष्ट्रेलियाको ताज्मानिया राज्य स्थित लन्चेस्टनमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुले हिन्दुहरुको महान...
काठमाडौं – नेपाल र भारतको विदेश सचिवस्तरीय बैठक दुई देशबीच देखिएको समस्या...